लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डाँग्मे डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मझतेक (हुआट्ला) मराठी मले मल्यालम माया मालागासी माल्टिज मिजो मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
बंगलादेशको ढाका सहरमा बस्ने ३५ वर्षीया स्मीता * एक मायालु अनि दयालु व्यक्ति थिइन्‌। आफूले ईश्वरबारे सिकेको कुरा अरूलाई बताउने असल अनि मेहनती गृहिणीको रूपमा तिनी छिमेकीहरूमाझ परिचित थिइन्‌। तर अचानक तिनी बिरामी परिन्‌ र एक हप्ता पनि नबित्दै तिनको मृत्यु भयो। तिनको परिवार अनि साथीहरूलाई कत्ति ठूलो झड्का लाग्यो होला!
न्यु योर्कमा बस्ने एक जवान दम्पती जेम्स र तिनकी पत्नी पनि स्मीताजस्तै असल व्यक्तिको रूपमा परिचित थिए। एकदिन तिनीहरू अमेरिकाको पश्‍चिमी तटतिर आफ्ना साथीहरूलाई भेट्न गए। तर तिनीहरू कहिल्यै आफ्नो घर फर्केनन्‌। एउटा ठूलो दुर्घटनामा तिनीहरूको मृत्यु भयो। यसले गर्दा तिनीहरूका आफन्त र साथीभाइको मुटुमा कहिल्यै नपुरिने चोट लाग्यो।
संसारमा व्याप्त दुष्टता र दुःखकष्ट हेर्न तपाईं कतै टाढा जानुपर्दैन। यस्ता घटनाहरू त तपाईंकै वरिपरि भइरहेका छन्‌। युद्धमा सिपाहीहरूका साथै आम जनता पनि मारिन्छन्‌। निर्दोष मानिसहरू हिंसा र आतङ्कको सिकार हुन्छन्‌। मानिसको उमेर वा सामाजिक ओहदा जस्तोसुकै किन नहोस्, दुर्घटना र रोगबिमारले कसैलाई छाड्दैन। त्यसैगरि प्राकृतिक प्रकोपले पनि सहर, गाउँ-बस्तीको नामोनिसान नै मेटाइदिन्छ। संसारको जुनसुकै कुनामा पनि भेदभाव र अन्यायले जरा गाडेको छ। तपाईं आफै पनि यस्ता समस्याको सिकार हुनुभएको छ होला।
त्यसैले यस्ता प्रश्नहरू मनमा उब्जिनु स्वाभाविकै हो:
यस्ता समस्याहरूको लागि ईश्वरलाई दोष दिन मिल्छ?
आपत्‌विपद् अकस्मात्‌ आइपर्ने कुरा हो या यसलाई मानिसले निम्त्याएको हो?
यदि ईश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँले असल मानिसहरूलाई विपत्तिबाट किन जोगाउनुहुन्न?
माथि दिइएका प्रश्नहरूको जवाफ पाउन हामीले सबैभन्दा पहिला यी दुई प्रश्नको जवाफ बुझ्नु आवश्यक छ: दुःखकष्ट किन आइपर्छ? अनि परमेश्वरले दुःखकष्टलाई के गर्नुहुनेछ?